दुई दशक जेल बसेका व्यक्तिहरू जब निर्दोष भेटिए पछि ....... - Everest Dainik - News from Nepal
दुई दशक जेल बसेका व्यक्तिहरू जब निर्दोष भेटिए पछि …….
काठमाडौं, साउन १० । दिल्ली बम आक्रमणमा सन् १९९६ मा दोषी ठहर्याइएका व्यक्तिहरू जेल मुक्त भएका छन्। मुक्त हुनेमा मोहम्मद अलि भट्ट, लतिफ वाजा र मिर्जा निसार रहेका छन्। आक्रमणपश्चात् उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरि हिरासतमा लिएको थियो। २३ वर्षको जेलजीवन बिताएर उनीहरू निर्दोष साबित भएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस पेस्तोल चोरीको आरोप लागेका प्रहरी पूर्वहवल्दार ३० वर्षपछि निर्दोष ठहर
आक्रमणमा उनीहरूको कुनै संग्लनता नदेखिएको दिल्ली अदालतले जनाएको छ। जेलमुक्त भएका मिर्जा भन्छन्, हामीले न्याय पायौँ। यो कुराबाट हामी खुशी छौँ। तर, यसलाई न्याय भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
ट्याग्स: दिल्ली बम आक्रम, निर्दोष